Full wakakomberedzwa exchanges Worktable gs-4020CE - China Dongguan Glorystar Laser
Product Features ● With zvizere akarikomberedza zvakapoteredza design, kuderedza Laser nemwaranzi uye kudzivisa chero zvokuimba kukuvara. ● Adopts kuti exchanges worktable kuponesa vachizvitakudza uye vachidzikisa nguva, uye kuti chieve dzakakwirira basa kunyatsoshanda. ● High chaizvo vachikuya giya uye giya pani, pasi ruzha uye yakakwirira nemazvo. ● Finessi pneumatic zvinoriumba, akangwara kuzvidzora kuti akakwana pasi-kumanikidzwa kusunga. Zvinoshanda indasitiri zvinowanzoshandiswa ose simbi zvigadzirwa maindasitiri akadai jira simbi kubudiswa, cookware uye ...
● Finessi pneumatic zvinoriumba, akangwara kuzvidzora kuti akakwana pasi-kumanikidzwa kusunga.
Laser simba 1000W, 1500W, 2000W, 3000W, 4000W, 6000W (Zvingakudetsera)
kushandira munzvimbo 4000 * 2000mm
hutachiwana muoti Pinion uye Rack, Double Driver
divi: 10000 * 3600 * 2000
Dongguan Glory Star Laser Technology Co., LTD, pamwe Sino-German, kunyanya kufunga Laser michina & mafomu, pashure pemakore kuramba utsanzi uye kukura, rava kuzivikanwa pamwero mukuru akaigadzira Laser michina. The kambani ane chemahofisi, R & D Building, machine chitoro, kupenda uye nomoto chitoro, vanoungana chitoro, showroom ano uye mwero mumaindasitiri factory.The wekambani chikuru zvigadzirwa vari simbi Laser nokuveza michina, asiri simbi Laser nokuveza michina, Laser kupenda michina, Laser nomoto michina uye vachikotama michina. The wegore kugadzirwa inokwana 8,000sets mishonga inotengeswa munyika dzinopfuura 100 uye nzvimbo ...
Previous: Full wakakomberedzwa exchanges Worktable gs-6015CE
Next: Open Type Fiber Metal Laser Kucheka Machine gs-3015E
Fiber Laser Kucheka Equipment
F-6018T Tube / Zvikwepa Fiber Laser Cutter